အလင်းသစ်: အခုတော့ ပြည်ပရောက် ဒီမိုကရေစီ လုပ်စားတွေ ငတ်ပြီ
အခုတော့ ပြည်ပရောက် ဒီမိုကရေစီ လုပ်စားတွေ ငတ်ပြီ
ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ဧရာဝတီ သတင်းဌာနအား ကျောထောက်နောက်ခံ ထောက်ပံ့ပေးနေသော ဒိန်းမတ်အစိုးရမှ ဧရာဝတီ အတွက် ထောက်ပံ့မှုကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်း
ဘန်ကောက်မှာ ရှိတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ သံရုံးကနေပြီး ဒိန်းမတ်နိုင်ငံက ချင်းမိုင်း အခြေစိုက် ဧရာဝတီ မဂ္ဂဇင်းကို ထောက်ပံ့ ကူညီနေမှုများကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ရပ်ဆိုင်း တော့မယ်လို့ ထုတ်ပြန် ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ အနေနဲ့ ဧရာဝတီ မဂ္ဂဇင်းကို အလှူရှင်တွေရဲ့ လှူဒါန်းမှု အပေါ်မှာ သက်သက် မှီခိုနေတဲ့ ပုံစံကနေ မိမိဘာသာ ရေရှည် ရပ်တည်နိုင်ပြီး ပြင်ပ အကူအညီ နည်းနည်းသာ ရယူတဲ့ပုံစံ အဖြစ် ပြောင်းပြီး ရပ်တည်နိုင်ဖို့ အတွက် မျှော်မှန်းခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဧရာဝတီ မဂ္ဂဇင်းရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေဟာ အဲဒီလို အသွင်ပြောင်းဖို့ စိတ်မ၀င်စားဘူး။ အကူအညီ ပေးရေး စီမံကိန်းမှာ ပါတဲ့ သဘောတူညီချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တယ်။ ဧရာဝတီ မဂ္ဂဇင်းဟာ တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ တစ်သန်း ကျော်ရှိတဲ့ အကူအညီတွေကို သုံးပြီး ၀န်ထမ်း ၆၂ ယောက် ခန့်ထားတယ်။ မဂ္ဂဇင်းရဲ့ အကြီးတန်းတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ ခရီး စရိတ်အပြင် အသုံးစရိတ်တွေ အတွက် ငွေတွေ ဖောဖော သီသီ သုံးပြီး ငွေကြေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ချွေတာ သုံးစွဲမှုတွေ မလုပ်ဖူးလို့ ထောက်ပြ ထားပြီး အလှူငွေတွေ အများကြီး သုံးပေမယ့် မဂ္ဂဇင်း စောင်ရေ ကျတော့ စောင်ရေ ၂၀၀ ပဲ ထုတ်တယ်လို့ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။
ပြည်ပရောက် ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့များ အတွင်းမှာ ငွေကြေး သုံးစွဲမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စနစ်ဇယား မရှိမှု၊ အဂတိ လိုက်စားမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်ပရောက် မြန်မာများကြားမှာ ထောက်ပြ ဆွေးနွေးမှုများ ရှိခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ပြည်ပ အကူအညီ ပေးသူများက ဒါတွေကို ထောက်ပြပြီး အကူအညီ ဖြတ်တောက် တာတော့ ဒါဟာ ပထမဆုံး ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါစာကတော့ ဧရာဝတီ သတင်းဌာနရဲ့ အယ်ဒီတာချုပ် အောင်ဇော် ရဲ့ ဘူးပေါ်သလိုပေါ်သွားလို့ အမြန်ဖာထေးရှင်းလင်းချက် ဖြစ်ပါတယ်
4. ဧရာဝတီအနေနဲ့ အလှူရှင်တွေ ထောက်ပံ့တာကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲမှုမရှိဘူးလို့ စောင်းပါးရိပ်ခြည် ပြောတာမျိုးကတော့ မမှန်တဲ့အပြင် စော်ကားရာလည်း ရောက်ပါတယ်။ ခရီးစရိတ်အပါအဝင် အဖွဲ့အစည်း လုပ်ငန်း တခုလုံးအတွက် ကုန်ကျတာတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံစာတွေ ကျနော်တို့ဆီမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိပါတယ်။ ဒါတွေကို ကျနော်တို့ရဲ့ အလှူရှင်တွေဆီကိုလည်း အချိန်နဲ့တပြေးညီ ပို့ပေးနေကျ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by အလင်းသစ် at 7:58 PM
ဒိန်းမတ်သံရုံးက ပိုက်ဆံမပေးဘူးလို့ပြောတော့မှ ဒိန်းမတ်သံရုံးက ရိုင်းတယ်၊ ဒီပလိုမတ်မပီသဘူး၊ Communication မှာ professional မဖြစ်ဘူးဘာညာကြားရတော့..ဒီလိုမျိုးတွေးမိလို့ပါ။ ဒိန်းမတ်အစိုးရကပေးနေတဲ့အချိန်မှာ ဘာအသံမှမကြားရ။ ဘာဖြစ်လို့အခုကြမှ အသံကြားရပါလဲဟင်..။ မပေးတော့ စိတ်ဆိုးမှာပေါ့နော်။Danish embassy's letter to Irrawaddy is rude and undiplomatic. So editors and senior management here want the embassy to say sorry and apology.
ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပက်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ကို အနောက်နိုင်ငံတွေက မကြိုက်လို့ပိုက်ဆံမပေးတာလားဟင်။ ဧရာဝတီအယ်ဒီတာရဲ့ ပေါ်လစီကို သဘောမကြလို့လားဟင်။ ရွေးကောက်ပွဲနီးလာမှ ဒီကိစ္စဖြစ်ရတယ်လို့ ဆင်ခြေပေးတာလားဟင်။ ကိုယ့်အမှားလည်း ကိုယ်ပြန်ကြည့်ပါအုံး...ဆရာတို့ရေ..။ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပြီး ဗြောင်တော့....မလိမ့်ကြပါနဲ့။ ဒီမိုကရက်တစ်လှုပ်ရှားမှုမှာ ဧရာဝတီရဲ့ အခန်းက သေးသေးလေးလေးပါဗျာ။ ဒါကိုတော့ လူတိုင်းသိပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ့်လည်း စွတ်ပြီး အထင်တွေမကြီးကြပါနဲ့..။ ခင်ဗျားတို့ မီဒီယာမရှိလည်း ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ရှိတော့ သတင်းပိုစည်ကားတာပေါ့။ ဒီလောက်ပါပဲ။ဗမာပြည်၊ ဇင်ဘာဘွေ၊ မြောက်ကိုရီးယား အစရှိတဲ့ပြည်ပအခြေစိုက်မီဒီယာတွေက စီးပွားရေးလုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အလှူရှင်တွေရဲ့ ထောက်ပံ့ကြေးကိုပဲ တချိန်လုံးမျှော်လင့်နေရတယ်ပေ့ါနော်..။ ဇင်ဘာဘွေပြည်သူတွေ၊ မြောက်ကိုရီးယားပြည်သူတွေ၊ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ လက်ချိုးရေလို့ရပါတယ်ဗျာ။ ကျနော်တို့လူမျိုးတွေ သုံးလေးသန်းလောက် ထိုင်းမှာရှိနိုင်ပါတယ်။ သူတို့အခြေအနေနဲ့ ကျနော်တို့အခြေအနေမတူကြပါဘူးဗျာ..။ တကယ်လုပ်ချင်ရင် တကယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒိုနာဆီကငွေက ပါးစပ်နဲ့လက်ပဲရင်းရတာဆိုတော့ မပင်ပန်းဘူးပေါ့။ ခေါင်းမစားဘူးပေါ့ဗျာ။